Laascaanood:Mudaharaad Ballaaran oo Looga soo Horjeedo Jirdilka wadaadka ee ku xiran xabsiga Hargaysa oo Laascaanood kadhacay.
Dadwaynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta Gobalka Sool ayaa Jimcadii ku waabariistay dibadbax aad u xogbadan kaas oo ka dhan ah jirdilka la sheegay in ay ciidamada soomaaliland kula keceen wadaad ku xiran xabsiga Hargaysa.
Mudaharaadayaasha ayaa isugu soobaxay bartamaha magaalada iyaga oo wata boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo ka dhan ah xukuumada lamagacbaxday Soomaaliland iyo erayo kale oo ay ka mid ahaayeen, hala siidaayo wadaadka diinta darteed u xiran, gaala raac doonimayno, diinta iibsade doonimayno, istustiska gaalada doonimayno iyo erayo kale.
Isu soo baxan oo haatan wali si teel teel ah uga socday (markii aan qormadan qorayney) ayaa dadku ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan ama ay uga xunyihiin falalka naxariisdarada ah iyo jidh dilka iyo ciqaabta daran isugu jira ee loogu geysanayo culumada ku xiran xabsiga magaalada Hargaysa.
Sida la xaqiijiyayna waxaa wadaadada laascaanod ay hada qorshaynayaan in ay ka soojeediyaan salaada jimce ka dib masaajida khudbado lagu muujinayo sida ay umada soomaaliyeed uga xuntahay xariga wadaadada ku xiran xabsiga hargaysa.
Mudaharaadkan mid la mid ah ayaa horay uga dhacay magaalooyinka Xingalool, Burco, Ceerigaabo, Baran.
Xariga wadaadka Shiikh Maxamed Ismaaciil ayaa markii uu soobaxay cajalka videoga ah soomali dhamaan ka wada caraysiiyay waxaana loogu baaqay soomaalilinad in ay si dhakhso ah u siidaayaan wadaadka islamarkaana baaritaan lagu sameeyo jirdilka lagu sameeyay wadaadka.
Mudaharaad Balaadhan oo lagu gubay calanka Somaliland oo ka socda laascaanood
Wararka laga helayo magaalada laascaanood ayaa waxay sheegayaan inay saaka waaberigii ka bilowdeen mudaharaadyo lagaga soo horjeedo jidhdilka iyo xidhitaanka maxamed sh,ismaaciil iyo culimada kale ee ku xidhan xabsiga hargaysa ,mudaharaadyadan oo ah kuwo aad u balaadhan ayaa waxay dadweynaha magaaladaasi ku gubeen goob fagaare ah calanka Somali land sidoo kalena waxay ku dhawaaqyeen allaahu akbar ,allaahu akbar iyo erayo ka dhan ah culimada ku xidhan xabsiga hargaysa gaar ahaan sheikh maxamed sh,ismaaciil ,sida ay soo sheegayo weriyaha c/qaadir gaabuush oo ku sugan goobta mudaharaadku ka socdo ee magaalada laascaanood.
Mudaharaadkan ayaa waxaa soo abaabulay culama-udiinka iyo waxgaradka gobolka sool waxuuna sida ay wararku nagu soo gaadhayaan ku nsocdaa ilaa iyo iminka si nabadgelyo ah.
Sidoo kale mudaharaadayaasha ayaa calanka maamulka la magac baxay Somaliland ,ku gubay meel fagaare ah isla markaana waxay dhulka ku jiideen calankii oo gubanaya iyadoo sida wararka lagu helayona muadaharaadayaasha ay wejiyadooda ka muuqato cadho xoogan.
Mudaharaadkan oo daba socday mudaharaadyo xoogan oo lagaga soo horjeedo jidhdilka culimada ku xidhan magaalada hargaysa ayaa waxuu ka kala dhacay gobolka sanaag ,togdheer iyo meelo kale.
Culamaa’udiinka magaalada lascaanood ayaa ugu baaqay maamulka daahir riyaale inuu si dhakhso ah ugu soo daayo culimada ku xidhan jeelka hargaysa.
Isku wada duuboo mudahaardkan ayaa ilaa hada si nabada uga soconaya magaalada laascaanood iyadoo ay xidhan yihiin goobaha ganacsiga iyo suuqyada magaaldaasi sida wararku sheegayaana ay goob fagaare ah kula hadli doonaan culimadu dadka isu soo baxay .
NB,.waxii wara ee kazoo kordha lasoco waraka 2aad